Huajing plastic-ọkwa mica ntụ ntụ, nke a na-ejikarị eme ihe maka plastik injinia iji mee ka modul na-agbanwe na mgbanwe; iji belata mbelata .N'akụkụ nke ngwa plastik nke ngwaahịa eletrọniki, mgbe ịtinye mica, ha nwere ike ịbụ nchikota nụchara anụcha na imewe.
Njirimara anụ ahụ nke Muscovite na Phlogopite
Ihe Muscovite Logogha
Agba colorless 、 aja aja 、 anụ pink 、 silk green claybank 、 aja aja、 na-emighị emi green 、 nwa
Nghọta 23 - 877 0-25
Amaka gloss nke iko, nkume pel na silk Ihe na-egbuke egbuke, dị nso na luster ọla, griiz luster
Gloss 13.5 ~ 51.0 13.2 ~ 14.7
Morse ekweghị ekwe 2 ~ 3 2,5 ~ 3
Usoro attenuatedoscillator / s 113 ~ 190 68 ~ 132
Njupụta (g / cm2) 2.7 ~ 2.9 2.3 ~ 3.0
Ike ikpo ọkụ / J / K 0.205 ~ 0.208 0.206
Kwes conductivity / w / mk 0.0010 ~ 0.0016 0.010 ~ 0.016
Eleastic ọnụọgụ (kg / cm2) 15050 ~ 21340 14220 ~ 19110
Ike Dielectric / (kv / mm) nke mpempe akwụkwọ 0.02mm 160 128
Huajing plastic-ọkwa mica ntụ ntụ, nke a na-ejikarị eme ihe maka plastik injinia iji mee ka modul na-agbanwe na mgbanwe; iji belata mbelata .N'akụkụ nke ngwa plastik nke ngwaahịa eletrọniki, mgbe ịtinye mica, ha nwere ike ịbụ nchikota nụchara anụcha na imewe. ọ nwere ike melite nguzogide ihu igwe nke ngwaahịa plastik, nke mere na plastik injinia nwere ike ịnagide ọnọdụ okpomọkụ na gburugburu ebe obibi ka ukwuu; ọ na-emezi mkpuchi dị ukwuu iji hụ na ntụkwasị obi nke ọrụ eletriki dị elu; Ọ nwere ike ịkwalite mmiri nke ụfọdụ ngwaahịa plastik akọwapụtara.
Mica ọla edo na-abụkarị odo, aja aja, ọchịchịrị ma ọ bụ oji; iko luster, cleavage elu bụ pealu ma ọ bụ ọkara ọla luster. Nghọta nke Muscovite bụ 71.7-87.5%, na nke nke phlogopite bụ 0-25.2%. Ike nke Mohs nke Muscovite bụ 2-2.5 na nke nke phlogopite bụ 2.78-2.85.
Mgbanwe na akụrụngwa nke Muscovite anaghị agbanwe agbanwe mgbe ọ na-ekpo ọkụ na 100,600C, mana akpịrị ịkpọ nkụ, akụrụngwa na akụrụngwa na-agbanwe mgbe 700C gasịrị, ekwedo na-efu ma bụrụ nke na-agbawa agbawa, ma bibie ihe owuwu ahụ na 1050 Celsius. mgbe Muscovite dị ihe dịka 700C, arụmọrụ eletrik dị mma karịa Muscovite.
Ya mere, a na-eji mica ọla edo eme ihe na plastik nke na-enweghị ihe dị elu maka agba mana nguzogide okpomọkụ dị elu.
Ngwa nke Mica na PA
PA nwere mmetụta dị ala na ike dị elu na akọrọ na obere okpomọkụ, nke na-emetụta nkwụsi ike akụkụ ya na akụrụngwa eletriki. Ya mere, ọ dị mkpa ịgbanwe adịghị ike nke PA n'ebumnuche.
Mica bụ ezigbo inorganic dịanyā maka plastik, nke nwere njirimara nke nguzogide ihu igwe magburu onwe ya, nguzogide okpomọkụ, nrụrụ kemịkal kemịkalụ, rigidity, mkpuchi eletriki na wdg. Ọ nwere ọdịdị dị egwu ma nwee ike ịkwalite PA na akụkụ abụọ. Mgbe mgbanwe nke elu ala gasịrị, agbakwunyere mica na PA resin, akụrụngwa akụrụngwa na nrụpụta ọkụ dịwanye mma, mgbatị nke ịkpụzi mekwara ka ọ kawanye mma, ọnụego mmepụta wee belata nke ukwuu.
Nke gara aga: Mica ala akọrọ